11/04/2018 - Page 2 sur 3 -
Gare routière Andohatapenaka : Vola iray gony nampisahotaka ny olona
Nitangorona ny olona, ary nisahotaka mahakasika ny fahitana olona nitondra vola natao tanaty gony izay mitentina 120 tapitrisa Ariary, teny amin’ny toby fiantsonan’ny taksiborosy teny Andohatapenaka , omaly antoandro. Tao ireo nijery fotsiny, tao ihany …Tohiny
Ampefiloha : Tovolahy mpianatra noratraina rangahy nitondra basy
Tovolahy 17 taona, mpianatra eny amin’ny oniversite iray tsy miankina eto an-drenivohitra no noratraina rangahy iray efa somary nahazo taona, nirongo basy teny amin’ny toerana fijanonan’ny fiara taksibe teny amin’ny Ampefiloha omaly maraina. Araka ny …Tohiny
FIKAMBANANA MADAGASIKARA SOA : Hivondronan’ireo mpanao politka lany daty
Efa fomba fanaon’ireo mpanao politika sasany no manangana fikambanana rehefa manakaiky toa izao ny fifidianana ahafahany mitady seza. Efa mihetsiketsika avokoa araka izany ireo mpanao poltika lian-tseza sy efa zatra nanao fomba mamohehitra hatramin’izay. Maro …Tohiny
Shell Betongolo, Mandroseza, Ambatomainty, Avaradrano : 250 tapitrisa Ariary ny teti-bidin’ny lasantsy nanjavona
Misedra fiakarana matetika ny lasantsy sy ny gazoala eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Mahazo vahana ihany koa araka izany ireo mpangalatra manoloana io fisondrotana lava io. Tsy tena fantatra noho izany ny tena antony na …Tohiny
“Ho nofinofy sisa izany delestazy izany”. Io no nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitokanana ilay tobi-pamokarana herinaratra vaovao eny Ambohimanambola. Nampitondraina ny anarana Tobim-pamokarana herinaratra Noor 1 sy Noor 2 izany, ary mamokatra herinaratra ...Tohiny
Antenimieram-pirenena : Nitondra ny feon’ ny vahoaka ireo depiote